Izu ole na ole gara aga, onye nọ na ntanetị Facebook m jụrụ ihe kacha mma mgbakwunye bọtịnụ mmekọrịta na-adị maka WordPress. M hụrụ n'anya ịdị mfe nke Akwụkwọ JetPack na eziokwu ahụ bụ na ọ mepụtara ya site na Automattic programmers (ndị mmepe nke WordPress); agbanyeghị, ma ọ bụ ntọala ndị ọbịa m ma ọ bụ mgbakwunye ụfọdụ mere ka nkesa popup bụrụ ihe na-abaghị uru (ekele Michael Stelzner maka igosi na!). M ka na-eji ngwa mgbakwunye iji kwalite ọdịnaya na netwọkụ mmekọrịta, mana anaghị m eji bọtịnụ nkekọrịta na saịtị ahụ ogologo.
Anyị na-ejikwa ya Ire ọkụ ngwa mgbakwunye nke mara mma nke ukwuu. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ ngwa mgbakwunye ma na-erezi bọtịnụ ọrụ mmekọrịta ha dị ka ndenye aha. Ọrụ ahụ arụghịkwa nke ọma ma m na-agbago n'ọtụtụ nsogbu ka m hapụ ya na ngwa mgbakwunye. Ọ dị oke njọ ebe otu n'ime njirimara dị ukwuu bụ na enwere m ike ịnweta ngụkọta maka ọkwa ọ bụla na m mepụtara ụfọdụ koodu iji tinye ha ebe ọzọ na ndebiri iji rata ọtụtụ mmadụ ịgụ.